Raffaello Sanzio (Ebla 6, 1483 - Ebla 6, 1520) baay'ee kan beekamu Raphael jedhamuun yoo ta'u arkitektii fi hallu dibaa Haaroomsaati. Inni Leonardo da Vinci fi Michelangelo waliin hallu dibdoota gurguddoo Haaromsa Guddaa sadan keessa isa tokko.
Fakkii isaa Madonna fi mucaa kiristoos (Chirist Child) fi dibaawwan Vatican, Rome, Xaaliyaanii argamaniin baay'ee kan inni beekamu.
1.1 Hojii Jalqabaa
1.2 The Madonnas
Perugia[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Raphael magaalaa Urbino naannoo Xaaliyaan Umbria keessatti hallu dibaa Giovanni Santi Ture (d. 1494) fi Magia di Battista Ciarlati (d. 1491) irraa dhalate. Giovanni Santi barsiisaa Raphael kan duraa ture, garuu yeroo Raphael ganna kudha tokkoo boqote.
Raphael gaafa ganna 15, bakka workshoppi hallu dibaa beekama magaala Perugia ta'uu isaa irraa kan ka'e maqaa Pietro Peruginon waamamu bira hojjataa ture. Peruginon Umbria qofattii miti, magaalaa Leonardo fi Michelangelo Rome fi Filorence keessattiis beekkamaa ture. Akkasuma artiistoota hojii barbachisoo Sistine Chapel guddaa Pope kan Vaatikaani argamu ramadaman keessa isa tokko ture.
Peruginon karaa hayyuummaa qabuun dibuun (teknikaan) kan beekamuu fi kan yeroo jedhamee xumuruun cimaa ta'uun isaa patronota isaa biratti beekkama isa godhe. Namoota tokko tokko bara isaa keessatti lubbuun jiran kan halluu dibe haa ta'u male fakkiin baay'een isaani fakkii amantaa duriiti. Fakkiin isaa muraasni suuraa Madoonna and Child kan waaqeffannaa dhuunfaa maatii chapel keessatti fayyadamuu ta'uudha. Waan inni beekama ta'eef, hojii baay'ee patrons fi mana amantaa irraa argataa waan tureef waan gudda kan koorniisa mana amantaaf ta'u baay'ee dibe. Kana gochuuf, gargaarsa hojii barattoota isaa barbaadaa ture.
Raphael Perugino irraa waan gudda barachu danda'eera kanneen akka fakki, fakki lafee namaa, kemistirii hallu dibuu, fi teknika dibata suura irra kaa'u. Fakkiiwwan dibaa Perugino keessa jiran yeroo baay'ee fuula bareedaa qabu. Fakkiin Raphaelis baay'een isaanii fuula nama toluu fi mijata qabu. Dibaan tokko tokko, kan akka Leonardo, istayili isaani jijjiiruu fi dibaa isaani irratti hojii isaani agarsiisuudhaf saffisoo turan. Garuu Raphael istayile perugino isa barsiisen halluu dibuu itti fufe. Hojii Artistoota biroo ilaaluun yaada haaraa itti dabalaa ture. Faallaa Leonardo fi Michelangelo ta'uun, Raphael aartii hallu dibuu kessatti waan haara tokko ille addunyaa kanaaf hin gumaachine. Inni salphumatti beekamaa kan ta 'eef waan hojjetu irratti hayyuu waan ta' eefi akkasumas namoonni fakkii isaa baay'ee waan jaallataniif.
Hojii Jalqabaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Dibaan hojii isaa isa duraani ta 'uuf yaadame suuraa xiqqoo mul'ata knight jedhamu dha. Halkkan hallu kana kessatti sobni rafe. Abjuu isaa keessatti dubartii babbareedduu lamatu jira. Dubarri tokko, uffata lallaafaa uffatte, abaaboo kenniif. Dubarri kan bira, uffata dukkana kessatti uffatte, knight sword fi kitaaba dhiyessi. Danddi dubara bareddu duuba laga bira figddi. Karaan biraa tabba sibilaa nama gessa. Raphael wa ' ee filannoo yaadaa ture. Halkan knight kun karaa salphaa ta ' een deemuu qaba, moo wantoota jijjiiruuf yaaluu qaba?
Suuraawwan kan biraa Raphaeliin ayyaana sadii, fi qulqulluu mikaa ' eel.
Hojiin Raphael inni jalqaba gaa 'ila durbbumma kan bara 1504. dibame. Perugino' s dibata sistine Chapel of Iyyesus furttu qulqullu Peterif kenne. Amma Brera Gallery milan keessa jira xaaliyaanii.
Raphael bara 1504 keessa dhukkuba biraa wajjin deeme, Pinturicchio, gara Filorence, Italy. Florence hojii artti isaatif beekama ture, workshoppi artistti isaa, ijaarssa haara fi katedral isa gudda dha. Raphael hojii Michelangelo, Leonardo da Vinci fi dibata barbachisa kan biro ilaalu barbaade.
The Madonnas[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Florence suura madonna fi da ' ima gochudhaf bayye cimaa qaba sababni isaas magaalan durbbe ebbifamttef. Danddi hundda irratti qarqara hallu hallu yookin hallu hallu madonna fi da ' ima.
Yeroo inni Florence keessa jiru, Raphael halluuwwan beekamoo madonna dibe. Fakkiiwwan beekamoo kanneen keessaa:
Madonna warqqi kana (c. 1505), kan amma uffizi Gallery keessa jiru Florence, Italy.
Madonna del Prato (c. 1505), kan muuziyeemii kunsthistorisches keessa jiru, Vienna, Austria keessatti.
Esterházy Madonna (c. 1505-07), kan muuziyeemii artii fayyaa, budapest, Hungary.
La Belle Jardinière (Madonna moora bareeda) (c. 1507), kan muuziyeemii Louvre keessa jiru, Paaris, Faransaayitti.
Architecture[gulaali | lakkaddaa gulaali]
1500 keessa, halluu dibaan yeroo bey'ee akka arkitekti dizayni godhu gaafatamu. Hojii Raphael dura akka arkitektitti kan ture chapel awwalchaa mana amantii Santa Mari del Popolo ture.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Raphael&oldid=33476" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 31 Onkoloolessa 2020, sa'aa 19:04 irratti.